जमानत याचिका खारेज भएपछि गौरीको आँखाबाट आँसु बगिरहेको भिडियो भाइरल – List Khabar
Home / समाचार / जमानत याचिका खारेज भएपछि गौरीको आँखाबाट आँसु बगिरहेको भिडियो भाइरल
जमानत याचिका खारेज भएपछि गौरीको आँखाबाट आँसु बगिरहेको भिडियो भाइरल
admin6days ago समाचार Leaveacomment 48 Views
कार्डिएला–द–इम्प्रेस क्रुजमा चलिरहेको हाइप्रोफाइल रेव पार्टीबाट पक्राउ परेपछि नै शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान नारर्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोको हिरासतमा छन् ।
शुक्रबार मुम्बईको अदालतमा आर्यनको जमानत याचिकामा सुनुवाई भएको थियो जसलाई खारेज गरिएको छ । जमानत याचिका खारेज भएपछि अब अदालत बाहिरबाट गौरी खानको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ जसमा उनी रोइरहेको देखिएकी छिन् ।
भिडियोमा गौरीले अनुहार ढाकेर रोइरहेको देखिएकी छिन् । गौरीको आँखाबाट लगातार आँसु बगिरहेको थियो जसलाई उनी लुकाउने कोसिस गरिरहेकी छिन् । यो भिडियो ८ अक्टोबरको हो जुन दिन गौरीको जन्मदिन पनि थियो ।
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का अधिकारीले आर्थर रोड जेल लिएर गएका छन् ।
७ अक्टोबर उनले एनसीबीको कार्यालयमा नै बिताए । यसका साथै अन्य ८ आरोपी पनि एनसीबीको कार्यालयमा उपस्थित रहे । आर्यन खानलाई जेल लिएर जाँदै गरेका केही तस्बिर भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले सार्वजनिक गरेको छ ।काठमाडौं, २५ असोज । हास्य कलाकार मनोज गजुरेल वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । उनले मञ्जु पोखरेलसँग सोमबार बिहे गरेका हुन् ।
Previous भोलि फूलपातीको दिन: तपाईको दिन शुभ-अशुभ कस्तो रहला? हेर्नुहोस् राशिफल!
Next तलब खान आएका होइनौं भन्दै वडाध्यक्षले दुई वर्षको तलबभत्ता बृद्धबृद्धालाई बाँडे